बैंकिङ खबर । राष्ट्र सेवकको ( निजामती, प्रहरी, शिक्षक र शसस्त्र ) पनि अनिवार्य जीवन बीमा हुने भएको छ । गत मंसिर ६ गते भएको सरकारको निर्णय अनुसार सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकहरुको राष्ट्रिय बीमा संस्थानले बीमा गर्ने भएको हो । संस्थानले …
तीन नयाँ निर्जिवन बीमा कम्पनीलाई कृषि बीमा गर्न १० जिल्ला बाँडफाँड
बैंकिङ खबर । बीमा समितिले तीन नयाँ निर्जीवन कम्पनीलाई कृषि बीमा गर्न १० वटा जिल्ला विभाजन गरेको छ । समितिले अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई ४ वटा, सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सलाई तीन वटा र जनरल इन्स्योरेन्सलाई तीन वटा जिल्ला तोकेको हो । अजोड इन्स्योरेन्सलाई गुल्मी, …
मेटलाईफ नेपालको दुई नयाँ डिजिटल सोलुसनको सुरुवात
बैंकिङ खबर । मेटलाईफ नेपालले आफ्नो १७औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर दुई नयाँ डिजिटल सोलुसनको सुरुवात गरेको छ । कम्पनीले KITE नामक Global Sale & Servicing Platform (GSSP) – powered mobility sales solution तथा कम्पनीकोे उत्पादन र सेवाहरुको प्रस्तावलाई अझ सजिलो तरिकाले …
गण्डकी बिकास बैंक र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स बीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । गण्डकी बिकास बैंक लिमिटेड र सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडबीच बीमा व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यले बैंकास्योरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार गण्डकी बिकास बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकहरुले मुलुकभर फैलिएको ७७ वटै शाखाहरुबाट बीमालेखहरु लिन, …
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सद्धारा अभिकर्तालाई तालिम प्रदान
बैंकिङ खबर । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले अर्घाखाँचीमा नयाँ तथा पुराना अभिकर्ताहरुलाई अभिकर्ता तालिम सम्पन्न गरेको छ । अभिकर्ताहरुलाई पुनर्ताजगी प्रदान गरी गाउँ गाउँमा बीमा सम्बन्धी जनचेतना फैलाई जागरुक गराउने र सम्पुर्ण नेपालीलाई बीमाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यका साथ कम्पनीले …
बैंकिङ खबर । अर्थसमितिमा छलफल सुरु भएको बीमाको विधेयकमा सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सांसदहरुले विभिन्न ८४ वटा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । संशोधन प्रस्ताव गरिएका मूख्य बुँदाहरु यसप्रकार छन् : १. दफा २० उपदफा ७ मा ‘प्राधिकरणको …
बैंकिङ खबर । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले संस्थापक सेयरधनीका लागि १०५ प्रतिशत अर्थात १ः१.०५ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको छ । पुष २२ गतेसम्म निष्काशन खुला रहने सेयरमा कात्तिक २६ गतेसम्म कायम सेयरधनीले आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन …
नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरु : कुनको मुनाफा कति ?
बैंकिङ खबर । हाल संचालनमा रहेका १८ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये नौ वटा जीवन बीमा कम्पनी नयाँ हुन् । संचालनमा आएको छोटो समयमा नै कम्पनीहरुले राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् । मुनाफामा रिलायबल नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स अगाडी नयाँ …
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी र देवः बिकास बैंकबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
बैंकिङ खबर । जनरल ईन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लि.(जिआईसि नेपाल) र देवः बिकास बैंक लिमिटेड बीच बैंकास्योरेन्स सेवा प्रदान गर्ने सम्वन्धी सम्झौता भएको छ । बिहिबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सो सम्वन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत …
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सकबीच पुनर्बीमा सम्झौता
बैंकिङ खबर । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड र प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड बीच नेपाल सरकारले चालु आ.व.२०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यबाट व्यवस्था गरे बमोजिम २०% प्रत्यक्ष हिस्सा पुनर्बीमा व्यवस्थाको लागि सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच …
संस्थागत एजेन्ट नियुक्तिलाई बैंकास्योरेन्सको नाममा प्रचार गरिँदै
बैंकिङ खबर । बैंकमार्फत बीमा पोलिसी विक्री गर्दा बढी जनतामाझ पहुँच पुग्ने अपेक्षासहित बैंक र बीमा कम्पनीबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता हुँदै आएको छ । अहिले बैंकहरु हरेक गाउँपालिका, नगरपालिका तथा अन्य कुनाकाप्चाका गाउँगाउँमा समेत पुगिरहेका छन् । तीनै बैंकमार्फत बीमा गर्ने …
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिन सर्वोच्चको आदेश
बैंकिङ खबर । सर्वोच्च अदालतले महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सलाई संचालन अनुमति दिन आदेश दिएको छ । बीमा समितिले लाइसेन्स रोकेको महालक्ष्मीलाई लाइसेन्स दिन सर्वोच्चले दोस्रो पटक आदेश दिएको हो । पहिलो पटक बीमा समितिले बिनाकारण व्यवसाय सञ्चालन अनुमति नदिएको भन्दै महालक्ष्मी …
बीमा : बीमाको आबश्यकता, महत्व र इतिहास
बैंकिङ खबर / ‘बीमा’ शब्द फारसीबाट आएको शब्द हो । जसको अर्थ हुन्छ– ‘भावार्थ’ अर्थात ‘जिम्मेवारी लिनु ।’ तर विभिन्न विश्लेषकहरुले बीमालाई जोखिम हस्तान्तरणको रुपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् । बीमा भनेको आर्थिक नोक्सान हुँदा दिइने क्षतिपुर्तिको ग्यारेन्टी हो …